बि.सं.२०७५ साल बैशाख ४ गते मङ्गलवारको राशिफल हेर्नुहोस्!आजको पञ्चाङ्ग –सहित
नेपाली मितिः वि.सं. २०७५ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३९ । बैशाख महिनाको ४ गते मङ्गलवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१८ अप्रिल महिनाको १७ तारिख ।
तिथीः उत्तरायण, बसन्त ऋतु बैशाख शुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथि, ०६ः४० बजेपछि द्वितीया तिथि ।
योगः प्रिती योग, २१ः३५ बजेपछि आयुष्मान योग ।
नक्षत्रः भरुणी नक्षत्र ।
करणः बव करण ०६ः४० बजेसम्म, उपरान्त बालव करण ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०५ः४० बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १८ः२९ बजे ।
राहुकालः १५ः१६ बजेपछि १६ः५३ बजेसम्म ।
यात्राः राहुकाल र अशुभवेला छाडी, शुभमुहूर्त पारी पूर्व दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ईज्जत तथा मानप्रतिष्ठामा विकास हुनेछ । दिन मनोरञ्जन एवम् खुशियालीप्रद रहने छ । मनोवाञ्छित स्वादिष्ट भोजनद्वारा मेजमानी मिल्नसक्ने छ । इष्टमित्रको आगमन हुने र कसैबाट उपाहार पनि मिल्नसक्ने गोचर स्थिति रहेको छ भने पारिवारिक सौहार्दता बढ्ने छ । नयाँकाम वा शेयर आदिको लगानीको अवसरको पनि सम्भावना देखिन्छ । पेशागत कामकार्यमा लाभ एवम् सफलता प्राप्त हुनेछ । आज यहाँलाई एक अङ्क, रातो रङ्ग र भगवान श्री गणेशको दर्शन भक्ति गर्नुु शुभकर हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन जनसंपर्क बढ्ने र तुलनात्मक रुपमा सहजवातावरण सृजना हुनेछ । कामकार्य तथा पेशा वा व्यवसायको क्षेत्रबाट आंशिकलाभ पनि हुनेछ । जसले गर्दा केहीहद्सम्म मानसिक सन्तुष्टि मिल्ने र साहस बढेर आउनेछ । तुरुन्तै फल प्राप्त गर्न नसकिएपनि केही महत्त्वाकांक्षी योजनाको बारेमा मानसिक चिन्तन तथा सरसल्लाह एवम् विचारविमर्श हुनसक्नेछ । मानसम्मान पाइने र भविष्यको लागि आश्वासन पनि मिल्नसक्ने छ । औकात अनुसारको पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी मिल्नसक्ने छ । आज यहाँले भगवान श्री गणपतिको र माँ बगलामुखीको स्तुति उपाशना गर्नु शुभकर हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन तसै सकारातमक मान्नसकिन्छ । पेशा तथा व्यवसाय अनुसारको सफलता मिल्नसक्ने गोचरले युक्त भएको दिन रहेको छ । उद्योग फस्टाउने छ, उच्चवर्गसँग भेट तथा संपर्क स्थापित हुनेछ, मानसम्मान एवम् पदप्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । धार्मिक–आध्यात्मिक चिन्तनको विकास हुने तथा सकारात्मक भावनाले प्रसय पाउनेछ । योगमार्गीहरुको लागि दिन विशेष उपलब्धिमूलक हुनसक्ने छ । यो राशि हुने आमव्यक्तिको हकमा बा“की रहेको कार्य पूर्ण गर्नसकिने र आर्थिक पक्षमा पनि सुधार आउनेछ । स्वजनसँग भेटघाट हुने तथा विशेष जरुरीमा सहयोग पनि मिल्ने हुनाले मनोबल पनि बढ्दै जाने र सफलता मिल्ने दिन छ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन जीवन साथी वा प्रेमिको गुनासाको सामना गर्नपर्नेछ । तथापि आमोद–प्रमोद तथा विलासवृतिप्रद दिनचर्या व्यतित हुनेछ । कसैकसैलाई गलतनियत भएको विपरितलिङ्गीको झमेला पर्नसक्ने खतरा पनि छ होस पुर्याउनु पर्ला । व्यवसाय तर्फ सामान्यभए पनि उन्नति हुनाले आर्थिक सङ्कलन हुनेछ । औपचारिक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुनपाइने सम्भावना छ । यात्राको पनि योग देखिएको छ । आज यहाँको लागि सात अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग फापकर हुनेछ भने भगवान श्रीगजानन्को श्रद्धाभक्ति गर्नु हितकर हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन बोली व्यवहारमा केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ । वादविवाद तथा मनमुटाव जन्य प्रतिकूलताको सम्भावना रहेकोले होसियारी पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । मानसिक सोँचमा पनि संकिर्णता बढ्नसक्ने छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही मन्दि आउनसक्ने छ । पारिवारिक समस्या थपिने र गर्नलागेको काममा विलम्ब हुने सम्भावना देखिन्छ । धैर्यतापूर्वक सकारात्मक भावनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहनाले केही लाभ भने गर्नसकिने छ । आज चार अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग यहाँको लागि उपयुक्त हुनेछ । आज यहाँलाई भगवान संकटमोचन हनुमानदेवको साथमा माँ बगलामुखीको आराधना र आमा वा आमासमानकी मातृशक्तिको आर्शिवादले विघ्नबाधा हटाउन मद्दत गर्नेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन पौरखीलो ग्रहगोचर परेको छ । आ“ट जोश जा“गर र पराक्रम बढ्ने छ । ईच्छाएको कामकार्य बन्नसक्ने देखिन्छ । व्यवसायमा प्रगति तथा लाभ एवं सफलता र श्रीबृद्धि हुनेछ । समाजसेवा तथा राजनीति एवम् सामाजिक संघसंस्था आदिको कामकार्यमा पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी मिल्नसक्ने छ । परिवारिक सदस्य वा स्वजनको बृद्धि हुने तथा कामकार्यमा साथ मिल्नेछ । आज तपाईले तीन अङ्क, हरियो रङ्गको उपयोग र भगवान श्री सिद्धिविनायकको स्तुति आराधना एवं गुरुजनको आर्शिवाद लिने काम गर्नु बुद्धिमानी तथा हितकर हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अतिथि सत्कार गर्न पाइने सम्भावना छ । घरपरिवारमा कुनै विवाह आदि माङ्गलिक शुभकार्यको प्रसङ्ग चल्नसक्ने तथा नयाँ पारिवारिक सदस्य बढ्नसक्ने वा सम्बन्ध विस्तार हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । परोपकार आदि समाजसेवाबाट सन्तुष्टि मिल्ने छ । प्रशंसकहरु बढ्नेछन् । बोलिवचनको प्रभाव पर्न थालेको छ । शारीरिक पौरख पनि बढ्ने तथा प्रतिस्पर्धा आदिमा सफलता मिल्ने र उत्साह बढ्ने दिन छ । आज तपाईको लागि दुई अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग र लम्बोदर श्री गणेश भगवानको सेवा आराधना तथा श्रद्धाभक्ति शुभकर हुनेछ ।